မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာများ -
မိန်းမတယောက်အတွက် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ တကိုယ်လုံးလှနေအောင် ဝတ်၊ ကျော့နေအောင် ဆင်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ပါပြီတဲ့ . . . မိန်းမကိုယ်ယားယံလာပြီ အတော်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာပါပြီ။ လူကြားထဲရောက်တဲ့အချိန် ‌အတော်အခက်တွေ့ကြပါတယ်။ ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ဖို့ မဝန်ရဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေ သိထားဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ယားယံတာကို ‌ဖြစ်စေတာဘာတွေလဲ ?
ယားယံလာပြီဆို ပထမဆုံးတွေးသင့်တာက ကိုယ်ဘာပစ္စည်းတွေသုံးလဲဆိုတာပါပဲ။ တချို့အနံ့မွှေးစေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက မိန်းမကိုယ်ကို allergic ဖြစ်စေပြီး ယားယံစေပါတယ်။ ဆပ်ပြာနဲ့ အလွန်အကျွံဆေးတာ၊ တကိုယ်ရည်သန့်စင်ဆေးတွေ အသုံးများတာ၊ လိမ်းဆေးတွေ၊ အနံ့ပါတဲ့ တစ်ရှူးစက္ကူနဲ့သုတ်တာ၊ ပိုးသားအတွင်းခံဝတ်တာ စတဲ့ အရာတွေက နူးညံ့တဲ့မိန်းမကိုယ်သားတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
2)မိန်းမကိုယ်မှာ မှိုစွဲတာ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်တာ
Yeast လို့ခေါ်တဲ့ မှိုစွဲပြီး ယားယံတာက မိန်းမ 4ယောက်မှာ 3ယောက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ Bacterial Vaginosis ဆိုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ‌ဆိုတော့ အရမ်းပြင်းတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ရက်ရှည်သောက်လိုက်တဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်တွင်းရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့ ပိုးလေးတွေ သေသွားပြီ မှိုတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဆို အနံ့ဆိုးတွေရမယ်၊ယားယံတာအပြင်၊ အဖြူဆင်းတာ(မီးခိုးရောင်ညစ်ညစ်တွေလို ဆင်းတာ)၊ လောင်သလိုခံစားရတာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတချို့ကြောင့် မိန်းမကိုယ်ယားယံနိုင်ပါတယ်။ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ၊ မိန်းမကိုယ်မှာ ရေယုန်ဖြစ်တာ၊ genital warts လို့ခေါ်တဲ့ ကြွက်နို့ဖြစ်တာ စတာတွေကြောင့် ယားယံနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုမိန်းမကိုယ်ကနေ အဝါအစိမ်းရောင်အရည်‌တွေဆင်းတာ၊ အဖုတွေစမ်းမိတာ၊ ဆီးသွားရင် ပူပြီးနာတာတွေ ခံစားရပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆို ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ သွေးဆုံးသွားတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးဟော်မုန်း‌(estrogen)တွေ လျော့ပါးသွားပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ ပုံမှန်စိုစွတ်အောင်ထိန်းထားပေးတာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ မိန်းမကိုယ်ရှုံ့သွားတာ အပြင်မိန်းမကိုယ်ကခြောက်သွေ့လာတော့ ယားယံလာတယ်။
စိတ်ဖိစီးတာက မိန်းမကိုယ်ကို ယားယံစေမယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးချိန်မှာ ခန္ဓကိုယ်ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားကျပြီး မိန်းမကိုယ်မှာ ပိုးဝင်နိုင်ပြီး ယားယံတာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ အရမ်းရှားပါးပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကင်ဆာဖြစ်ရင် တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ မိန်းမကိုယ်အပြင်သားတွေမှာ ယားယံတာ၊ မှုမမှန်သွေးဆင်းတာ၊ မိန်းမကိုယ်တဝိုက်နာနေတာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပြီလဲ ?
မိန်းမကိုယ်က ကိုယ်မခံနိုင်အောင် ယားယံနေတာမျိုး၊ ကိုယ့်နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်
တာတွေကို ထိခိုက်လာတာမျိုးဆို ပြသင့်ပါပြီ။ ဥပမာ – မိန်းမကိုယ်မှာ အဖုတွေ ၊ အနာတွေဖြစ်လာတာမျိုး၊ ရောင်ရဲပြီး နီနေတာမျိုး၊ ဆီးသွားရခက်နေတာမျိုး၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပါ ထိခိုက်လာတာမျိုးတွေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်မလဲ ?
ဆပ်ပြာတွေ၊သန့်စင်ဆေး‌တွေနဲ့ အရမ်းဆေးလိုက်ရင် မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကောင်းတဲ့ပိုးတွေသေကုန်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ရေနဲ့ဆေးရင် လက်ကို အရှေ့မှအနောက်သို့ ဆွဲယူပြီးဆေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။
2)အတွင်းခံအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တတ်ပါစေ။ လှချင်လို့ ပိုးတွေ၊ ဇာတွေ၊ နိုင်လွန်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံတွေက တချို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မတည့်တဲ့အတွက် ယားယံစေတာပါ။ ချည်သားပါးပါးလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အတွင်းခံစိုနေရင်လဲ မဝတ်ပါနဲ့။ တင်းကျပ်နေတဲ့ အတွင်းခံလဲ မဝတ်ပါနဲ့။ လေဝင်လေထွက်မကောင်းရင် အနံ့ဆိုးတွေဖြစ်စေပြီး ယားယံတာလဲပိုဆိုးစေ
ဒိန်ချဉ်မှာ လူတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ ကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပါပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒိန်ချဉ်ကို ပုံမှန်သောက်ရင် မိန်းမကိုယ်မှာ မှိုစွဲတာ၊ ပိုးဝင်တာတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ရေခဲကို အဝတ်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်ပြီး မိန်းမကိုယ်အပြင်သားကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကပ်ပေးတာ ယားယံတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ရေခဲအတုံးလိုက်နဲ့တော့ မကပ်ပါနဲ့။
မိန်းမသားအားလုံး ကျန်းမားပျော်ရွှင်ပြီး အလှတိုးနိုင်ပါစေ။
Sep 14, 2021 Health Tips, Sex Education
သွေးတိုးနဲ့ ” ဆား “